Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii wada-tashiga ururada ka soo horjeeda gumaysiga Wayaanaha
Shirkii wada-tashiga ururada ka soo horjeeda gumaysiga Wayaanaha
Waxaa magaalada London maalin nimadii Axada ahayd ee ku beegnayd taariikhdu 31.7.11 abbaarihii 14.30 ka dhacay shir ay isugu yimaadeen sadex urur oo la wada dagaalama gumaysiga Wayaanaha, shirkaa oo dad aad u badan oo kor u dhaafaya 500 ay ka soo qayb galeen.
Shirka oo cinwaankiisu uu ahaa habkii wayanaha loola dagaalami lahaa wadajir –Fighting Woyaane Tyrant Regime Together – ayaa soo dhawayntii kadib Waxaa bilaabmay khudbadihii shirka loogu tala galay oo urur walba uu soo jeedinayay.
Waxaa loo yeedhay Hogaanka Abaabulka iyo jaaliyadaha ee JWXO Mudane Maxamed Yasiin oo goobtii ka jeediyay khudbad aad iyo aad u tafatiran oo ka waramaysay mawqifka JWXO isagoo si fiican u soo bandhigay dhibaatada cadawgu ku hayo shacabka ogadenya iyo in uusan shacabka geesiga ah uusan u liicin ee uu ku jiro iska caabitiisa.
wuxuu ku soo gunaanaday in JWXO iyo shacabka geesiga ah ba ay diyaar u yihiin sidii ay isaga dhicin lahayeen gumaysiga Wayaanaha oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid nugul oo aan lahayn awooda uu sheeganayo. Wuxuu hogaanka ku baraarujiyay ururada kale in la helo wada shaqayn ku aadan habkii loo wada ridi lahaa iyadoo cid walba wadato agandaheeda.
Waxaa ka dib lagu soo dhaweeyay Dr Kuntie Mossa Madaxa haya’adda Arimaha dibadda iyo Dhaqaalaha ururka – Affar Peoples party – oo isna Si aad ah ugu dheeraaday dhibaatada uu ku hayo gumaysigu umada Canfarta iyo in loo baahan yahay in la abuuro hab iskaashi kaasoo keena habka ugu wanaagsan ee loo kala daadin lahaa maxaysatada cadawga ah.
Waxaa hadana khudabadii qaatay oo lagu soo dhaweeyay Atto Andergachew oo ah Xoghayaha guud ee GInbot 7, wuxuuna xoghayuhu si aad ah oogu nuuxnuuxsaday dhibaatada Tigreygu ku hayo dhamaan inta meeshan isugu timid iyo inbadan oo ka maqan waxaana maanta faa’iido inoo ah buu yidhi in aan inteenani wada fahanay dhibaatadaas ayna suurto gal ahayn in urur kaligii Wayaanaha dhulka la simo balse loo baahan yahay in la helo iskaashi guud oo saldhigiisu yahay habkii loola dagaalami lahaa wayaanaha iyadoo cid walba aamin santahay Waxay aaminsantahay.
Khudbadihii kadib ayaa Waxaa furmay su’aalihii oo badan kood isku meel ku biyashubanayay waxaana oogu muhiimsanaa.
S. maxay yihiin calamadan faraha badan anagu mid unbaan ogayne.
J- Waxaana qaatay Atto Andergachew oo jawaabtiisa ku bilaabay waad hurudaa calamadanina waa calamo ka turjumaya nin walba iyo wuxuu aaminsanyahay waxaad katari kartana majiro, waxaadna ogaataa in ay yihiin dhibaato kale oo Itobiya u taal sugaysana in la xaliyo.
S.iskaashigan ma Waxaa idinku khasbay dhibaatada hada jirta mise waa mid sikale u timid .
J.Waxaa qaatay Mudane Maxamed Yasin HAAB ee jxwo wuxuu yiri wax walba xilli ayuu leeyahay marka xiligani waa xiligii munaasabka ku ahaa.
S. Arintani ma arin ficil loo badalibaa mise waa arin aad afka uun kasheegaysaan.
J.Waxaa ka wada jawaabay dhamaantood Waxayn iska daba dheheen Maya Waxay noqon doontaa mid sida ay maanta tahay ka guda wayn, waxaanuna rajaynaynaa in wixii maanta ka soo baxay shirka uu noqon doono hawlo farabadan oo waxyeelo u gaysta gumaysiga faa’iidana inoo noqda.
(wiil wardheer) says:
waanu soo dhawaynaynaa waxkasta oo ridaaya nadamkan faashilka ah xisaabtana halagu daro dulmiga africa in aan loo dulqaadan doonin
samater magan says:
manaa waalan mise cadanbaa laga heesayaa.aragaajow waa axmaar hadaba goormaan heshiin oo aan wax meel isladhignay?
waxaanu soo dhawaynaynaa waxkasta oo ridaaya nadaamka xaaqid aka ah ee dulmiga kasamaysan